Imbasii Jerusaalem: Aanga'oonni Ameerikaa sirna baniinsaarratti argamuuf - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Qontsilaa Ameerkaa kan yeroof akka Imbasii Ameerkaatti tajaajilu
Ameerikaan Imbasiishee Jerusaalemitti banuuf sagantaan har'atti qabatte,warra Israa'eliin jajamee warra Paalestaayinirraa garuu mormiin eegalameera.
Sirna baniinsaa kanarratti intala Pirezidaanti Tiraamp Ivaankaa fi abbaa warraashee Jaared Kushner dabalatee qondaaltonni Ameerikaa ni argamu.
Gamtaa Awurooppaa bakka bu'anii kan sirna kanarratti argaman garuu hin jiran.
Murteen Doonaaldi Tiraamp Imbasii Ameerkaa Teel Aviiv irraa gara Jerusaalemitti naannessuuf murteessan warra Paalestaayin kan Jerusaalem Bahaa akka magaalaasaanii egereetti ilaalan hedduu aarseera.
Israa'el Jerusaalem Bahaa kan to'atte waraana Baha Giddu Galeessaa bara 1967 geggeeffamerratti. Ergasii magaalatti ''kan bara baraa fi kan hin qoqqoodamne '' jechuun beekamtii laatteef.
BAra darbe Pirezidaanti Tiraampi Jerusaalem magaalaa Israa'el taate jedhanii beekamtii kennuufiinsaanii gidduu galeessummaa Ameerikaa barootaaf ture cabseera. Hawaasa Idil Addunyaafis waan oodaa ta'eera.
Ameerkaan ammaaf bakkuma xiqqoorratti bantee boodarra waajjira Teel Aviiv jiru guutummaatti gara Jerusaalem geessuuf jetti.
Sirni baniinsa Imbaasii Ameerikaa kun waggaa 70ffaa bu'uureffamuu biyya Israa'eelii waliin walirra bu'eera.
Pirezidaanti Tiraampi warra sirna kanarratti hirmaataniif karaa viidiyootiin dhaamsa dabarsuuf jiru.
Goodayyaa suuraa Lammiileen Israa'eel miira gammachuu keessa jiru
Dhimma banamuu Imbasii Ameerkaa ilaalchisee jila Gamtaa Awurooppaarraa mormiin kan dhagahamaatti jiru wayita ta'u, Ministirri Muummee Israa'eel biyyoonni hundi Ameerkaa gargaaranii Imbaasiishee Teel Aviiv irraa gara Jerusaalem akka ceesisan gaafataniiru.
Pirezidaantiin Paalestaayin Mahmuud Abbaas gamasaaniin murtee Tiraampi akka biyyasaanii sarbuutti ibsaniiru.
Goodayyaa suuraa Lammiileen Paalestaayin banamuu Imbasii Ameerkaarratti wayita mormii dhageessisan.
Erga bara 1967tii Israa'eel lammiilee Jew kuma 200f manneen Baha Jerusaalemitti ijaarteetti. Naannoo kanarratti manneen ijaaruusheetiif Israa'eel seera Idil Addunyaatiin irra deddeebiin dhorkamtus boodatti hin jenne.
Saawudiin warra Jamaal Kaashogjii ajjesuun shakkaman dabarsee hin kennu jette